Sidee uga faaʼiidaysan kartaa casharrada Kitaabka? — ONLINE LAYBREERIGA Watchtower
Sidee uga faaʼiidaysan kartaa casharrada Kitaabka?
Qaybtan fiidiyow ma ku diyaarsana.
Waan ka xumnahay, fiidiyowgii ma soo bixin cillad awgeed.
Ku Raaxayso Nolosha Weligeed ah!—Hordhaca Casharrada Kitaabka
Sidee baad uga faaʼiidaysan kartaa casharrada Kitaabka?
Macallin wax la baro: Qofkii qormadan ku siiyay ka codso inuu kula dhigto Kitaabka ama codsigaaga u gudbi websitekeenna, jw.org.
QAYBTA UGU HORREYSA
Akhri qodob walba. Suʼaalaha ku qoran xarfaha muuqda (1) iyo aayadaha (2) waxay soo saaraan qaybaha muhimka ah. Xusuuso in aayadaha qaarkood lagu qoray “Akhri.”
Qoraalka ka hooseeya (3) qaybta la dhaho Si Fiican Uga Feker ayaa sharxo fekradaha laga wadahadli doono. Cinwaannada yaryar (4) si kooban bay u soo bandhigaan qaybaha muhimka ah. Akhri aayadaha, ka jawaab suʼaalaha markaasna daawo fiidiyowyada (5).
Eeg sawirrada iyo qoraalkooda (6), oo ka feker sida ad uga jawaabi lahayd qaybta Dadka Qaarkood Waxay Dhahaan (7).
QAYBTA UGU DAMBEYSA
Qaybaha la dhaho Soo koobid iyo Dib u eegid (8) casharkay soo gabaggabeeyaan. Maalinta ad casharka dhammaysid qoro. Qaybta lagu magacaabay Hadafkayga (9) waxay fartaa waxyaalo ad hirgelin kartid. Qaybta la yiraahdo Baadh (10) waxaa ku kooban macluumaad dheeraad ah oo ad ikhtiyaar u leedahay inaad akhrisid ama daawatid.
Sida loo helo aayadaha Kitaabka
Qorniinka Kitaabka waxaa la heli karaa marka la eego buugga Kitaabka (1), kaddibna qaybta (2), iyo aayadda (3). Matalan, 2 Timoteyos 3:2 waxay ka dhigan tahay buugga Timoteyos labaad, qaybta 3, aayadda 2.
Wargeysyada af Soomaali (2011-2021)
Nidaamka Xog Dhawridda